Heart Museum: နာဂစ်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း (၁)
နာဂစ်ကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း (၁)
ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်း နာဂစ်ကြောင့် ပျောက်ဆုံးသူနှင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက် တိုးလာသည်မှာ ကြောက်ခမန်းလိလိ ဖြစ်၏။ အဘယ့်ကြောင့် လူအသေအပျောက် ဤမျှ များရပါသနည်း။ ဘာ့ကြောင့် အပျက်အစီး ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု များပြားရပါသနည်း။ ဤသို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ နောင်တွင် ကြုံတွေ့လာပါက လူအသေအပျောက်နှင့် အဆောက်အဦ အပျက်အစီး ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု နည်းနိူင်သမျှနည်းအောင် မည်သို့မည်ပုံ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမည်နည်း။ စသည့်စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ဝေဖန်သုံးသပ် ဆင်ခြင်စဉ်းစားရန် နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် ဆိုက်ကလုန်း နာဂစ်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာရန် လိုအပ်လှပေသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်တော်က နာဂစ် လေမုန်တိုင်း မဖြစ်ပွားမှီ အခြေအနေ၊ လေမုန်တိုင်း တိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေ နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါသည်။ အမြင်တူသူ၊ အမြင်မတူသူ မည်သူမဆို အပြုသဘော ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
် နာဂစ်ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်း မတိုက်ခတ်မှီ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလှပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရွှေနိူင်ငံတွင် လူထုကြားသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိ အသိပေးနိူင်သော သတင်းဖြန့်ဖြန့်ချီရာဋ္ဌာန (၃)ခုသာရှိ၏။ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ဖြစ်၏။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ဘေးထွက်ဆိုးကြိုး ဖြစ်စဉ်အရ ကျွန်တော်တို့ ချစ်သောမြန်မာနိုင်ငံတွင် အပူချိန်မြင့်မားမှု၊ ရေကြီးမှု၊ မိုးခေါင်မှု စသည့်ကိစ္စရပ်များကို ယခင်က မကြုံဖူး၊ ယခု မလိုချင်သော်လည်း မလွှဲမရှောင်သာ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ကြုံရသည် ။ နောင်လည်း ကြုံရဆုံရ အုံးမည်ဖြစ်သည်။ နာဂစ်လေမုန်တိုင်း မဖြစ်ပွားမှီ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါလည်း ဆိုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ မြန်မာနိူင်ငံတွင်းရှိ အခြေခံလူတန်းစား အလုပ်သမား နှင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ ရုပ်မြင်သံကြား ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း အောက်တွင် ရှိသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား ပိုင်ဆိုင်သူများမှာလည်း လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲကြောင့် ညပိုင်းတွင်သာ ဘက်ထရီမီးဖြင့် ဖွင့်ကြည့်ကြသည်။လူများစုကြည့်ရှုသော ရွာများတွင် ပြန့်ကျဲတည်ရှိသော ဗွီဒီယိုရုံများမှာလည်း ဖျော်ဖြေရေးကား သာပြသ၏။ သတင်းမဖွင့်ပါ။ လူများစုလက်ထဲသို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိသော သတင်းစာပါ နာဂစ် လေမုန်တိုင်း မဖြစ်ပွားမှီ မိုးလေ၀သ သတင်းကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ ဖတ်ရှုကြပါကုန်....
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ အရေးပေါ်မိုးလေ၀သ သတင်းကို (၃)ရက်ခန့် ကြိုတင်ထုတ်လွင့်နိူင်ပါလျှက် အလွန့်အလွန် နီးကပ်မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပါသည်။ နယ်မြို့များက သိရှိဖို့နေနေသာသာ ရန်ကုန်မြို့မှ လူများစုကြီးပင် ထိုအရေးပေါ် သတင်းကြေငြာချက်ကို မသိရှိကြပါ။ ဈေးရောင်းနေသူ၊ အလုပ်သွားနေသူများ အတိဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါသည်။ သိရှိသူများလည်း ဘေးလွတ်ရာသို့ ရှောင်ချိန် မရခဲ့ပါ။ ဘီဘီစီ သတင်းဋ္ဌာနမှ မိုးလေ၀သ နှင့် ဇလဗေဒဦးစီးဋ္ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးထွန်းလွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကို ကြိုတင်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးထွန်းလွင်မှ ယင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ ပြင်းအားပမာဏ နှင့် ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်း အခြေအနေကို အမှန်အတိုင်း တာဝန်ကျေပွန်စွာ ဖြေကြားထားပါလျှက် ပြည်သူလူထုထံ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရောက်ရှိသော သတင်းစာ၊ ရေဒီယို နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဋ္ဌာနမှ သတင်းမှန်ကို ဘာကြောင့် မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသနည်း ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။မြန်မာ့အသံ နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဋ္ဌာနမှ သတင်းစာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွင် လေမုန်တိုင်း လာရာလမ်းကြောင်း၊ ဖြတ်သန်းမည့်နေရာ၊ လေတိုက်ခတ်နှုန်း၊ ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ၊ စသည့် မိုးလေ၀သအခြေအနေများကို မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မည့် မနက်ထိ မမှန်မကန် ဒွိဟပွားဖွယ်ရာ မိုးလေ၀သသတင်းကိုသာ ထုတ်လွင့်၊ရိုက်နှိပ် အသိပေးခဲ့သည်။ နောင်တွင် အလားတူ ကိစ္စများ မဖြစ်ပွားစေရန် တာဝန်ရှိသူများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး အရေးယူသင့်ပေသည်။
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းကြီးက အဘယ့်ကြောင့် ဤမျှ ပျက်စီးစေခဲ့ပါသနည်း။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိူင်ငံ၏ အမျိုးသား လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းချောက်နေသော ပြဿနာအသစ်ကို မည်သည့်အစိုးရ၀န်ကြီးဋ္ဌာန မှသတိထားမိပုံမပေါ်ပါ။ ထိုအရာကား ကျွန်တော်တို့ ဘိုးဘွားအမွေအနှစ် တောတောင်ရေမြေ သဘာဝတရားကြီးမှာ မြန်မာနိူင်ငံသားတို့၏ ပညာရေးအသိအမြင် နည်းပါးမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ ၀ိသမလောဘသားတို့၏ မမှန်မကန် စီးပွားရှာ ပုဇွန်မွေးမြူရေး စီမံကိန်းတို့ကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပင် ဖြစ်၏။ နာဂစ်လေမုန်တိုင်းကြီး အဓိက မွှေနှောက်သွားသော ဧရာဝတီ မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင်ဒေသ ဧရာဝတီတိုင်းအား ပင်လယ်ဆားငန်ရေ မ၀င်နိူင်စေရန်နှင့် ပင်လယ်ပြင်တွင် လှိုင်းကြီးလေထန်ပါက ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ ဒီလှိုင်းရိုက်ခတ်မှု သက်သာစေရန် သဘာဝအရ ဒီရေတောများက ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုအခါ ထိုသဘာဝ ဒီရေတောများမှာ ဒေသခံများ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု၊ ပညာရေး အသိအမြင် နည်းပါးမှုကြောင့် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ သစ်တောခုတ်ထွင်ရောင်းချမှု၊ မီးသွေးဖုတ်မှု၊ သစ်တောခုတ်ထွင် ပုဇွန်ကန် မွေးမှု တို့ကြောင့် မိန်းမလှကျွန်းမှတပါး အခြားနေရာများတွင် ပြောင်သလင်းခါခဲ့ရသည်။
ဤသည်တို့မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းမ၀င်မှီ အခြေအနေတို့ကို ကျွန်တော့်အမြင် ဝေဖန်သုံးသပ် ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင် နာဂစ်လေမုန်တိုင်း တိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေ နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များအား တင်ပြလိုပါသည်။
Posted by Heartmuseum at 9:24 PM
Thanks for the post. I am making some collection about Nargis. Please let me the information link that you though it's important. I wish we would have been well prepare for this. :)
အကြံပြုဆွေးနွေးထားတာ လက်ခံပါတယ် ကျနော်တော့ သဘောကျတယ် အစ်ကိုရေ့ အခုရက်ပိုင်း ဘာမှမလုပ်ချင်တော့လောက်အောင် စိတ်ဓာတ်တွေ ကျနေတာ ကို.ယ်စားပြောထားသလိုပဲ ...............ဆက်ရန်ကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ။
လေးစားပါတယ် ပြတိုက်ရာ.....။ ဆက်ရေးပါ...။